मृतकका अवशेष अन्तरिक्षमा पठाइने ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
मृतकका अवशेष अन्तरिक्षमा पठाइने !
प्रकाशित मिति १९ मंसिर २०७५, बुधबार २३:०० लेखक नेपाली जनता
वासिंगटन । ३६ वर्षीय जेम्स एबर्लिङले २०१६ नोभेम्बरमा मृत्यु हुनुअघि आमाबाबुलाई आफ्नो अन्तिम इच्छा सुनाउँदै दाहसंस्कारपछि आफ्नो अवशेष अन्तरिक्षमा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । अहिले उनीसँगै थप १ सय मृतकहरूका अवशेष पनि स्मारक स्याटलाइटमा राखेर लन्च गरिने भएको सिएनएनले जनाएको छ । स्यानफ्रयान्सिस्को स्थित एलिसियम स्पेसका अनुसार परिवारहरूले यसका लागि प्रतिव्यक्ति २५ सय डलर तिरेका हुन् ।
यसरी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलगायत अन्तरिक्ष र एरोस्पेसमा रुची राख्ने व्यक्तिहरूको अवशेष स्पेसएक्सको फेल्कन रकेटमार्फत पृथ्वी बाहिर पठाउन लागिएको हो । सबै खरानीलाई नामसहितको ४ इन्चका स्याटलाइटमा राखि लन्च गरिने बताइएको छ । परिवारहरूले सो स्याटलाइटलाई अन्तरिक्षसम्म उडान भर्दै गर्दा वास्तविक समयमै ट्रयाक गर्न सक्नेछन् । यसरी यो स्याटलाइट पृथ्वीमा खस्नुअघि चार वर्षसम्म अन्तरिक्षमा घुमिरहने छ जसबारे परिवारहरूले एउटा एपमार्फत जानकारी पाइरहनेछन् ।
स्पेसफ्लाइटले आयोजना गरेको ‘राइडशेयर मिसन’ अन्तर्गत कम्पनीले स्कुलदेखि व्यवसायिक, सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका ग्राहक समेतलाई सेवा प्रदान गर्न सो रकेट खरिद गरेको थियो । जसमा ३४ भिन्दाभिन्दै संस्थाहरूले ६४ वटा साना स्याटलाइट बाहिर पठाउने बताइएको छ । सोमबारको कार्यक्रम भने दुई वर्ष अगाडि नै तय गरिए पनि अहिले मात्र यसको तयारी पूरा भइ लन्च गरिने भएको हो ।
यसरी मानिसको अवशेष पृथ्वी बाहिर पु¥याइएको यो पहिलोपटक भने होइन । १९९८ मा पनि नासाले अन्तरिक्षयात्री युजिन सुमेकरको अवशेष चन्द्रमासम्म पु¥याएको थियो र अझै पनि उनको अवशेष चन्द्रमाको सतहमै रहेको बताइन्छ । यसका साथै स्टार ट्रेकका अभिनेता जेम्स दुहानको अवशेष पनि एलिसियम कम्पनीको यस्तै मिसनमार्फत अन्य ३ सय २० अवशेषसँगै अन्तरिक्षसम्म पु¥याएको थियो ।
काठमाडौं । चालु अर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अधिकांश बैंकको नाफा उच्च दरले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो…
एक महिनामै ढलान भत्के पनि भुक्तानी सडकमा चरम भ्रष्टाचार : अख्तियार कहाँ छ ?
काठमाडौं । सडक निर्माणमा चरम भ्रष्टाचार गरेको गुनासो आएपछि डिजिभन सडक कार्यालय ललितपुरका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा…
सुत्केरीलाई खुवाइँदै आएको आइरन चक्की किशोरीलाई पनि खुवाइने
कालीकोट । जिल्लामा सुत्केरीलाई खुवाइँदै आएको आइरन चक्की किशोरीलाई पनि खुवाइने भएको छ । जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय कालीकोटको आयोजनामा…
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अर्को नयाँ काण्ड
काठमाडौं । चर्को दवावमा परेको कम्युनिस्ट सरकारले निर्मला पन्त बलात्कारपछिको हत्याकाण्डमा प्रहरीले फेरि तीनजनाको डिएनए नमूना संकलन गरेको छ…
उपेन्द्र देवकोटा हामीमाझ नै हुनुहुन्छः श्रीमती मधु देवकोटा
काठमाडाैं । प्रख्यात स्नायु शल्य चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटा आफूमाझ नै रहेको उनकी श्रीमती मधु देवकोटाले बताएकी छिन् ।
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 375 views